मास्कको प्रयोगबारे बालबालिलाई सिकाउनुपर्ने कुरा
२०७७ कार्तिक ९ आइतबार
२०७७ आश्विन २७ मंगलबार
काठमाडौं - बालबालिकालाई कोभिड १९ को कुनै लक्षण नभएको अवस्थामा पनि सार्वजनिक स्थलमा रहँदा अनुहारमा मास्क लगाउन जरुरी छ । मास्कको प्रयोग गर्नाले उनीहरूले कोभिड १९ सार्नबाट रोक्न मद्दत गर्न सक्छन् र आफ्नो परिवार, आफ्नो समुदायसँगै आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्दछन् ।
पछिल्ला प्रमाणहरूले बालबालिका कोभिड १९ बाट संक्रमित हुन सक्छन् र एकअर्का तथा वयस्कहरूलाई पनि संक्रमित गर्न सक्दछन् भनेर देखाउँदछ । यद्यपि, उनीहरू संक्रमणबाट गम्भीर रुपमा विरामी पर्ने जोखिम कम छ र साना बालबालिकाले ठूलाहरूलाई भाइरस सार्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
बालबालिकालाई उनीहरूले दैनिक जीवनमा मास्क कसरी लगाउनुपर्दछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ श्रीहरि दत्त यसो भन्छन्
मास्कले कसरी काम गर्दछ ?
मानिसहरूले कुरा गर्दा, गाउँदा, खाँदा वा खोक्दा निस्कने श्वासप्रश्वासका थोप्लाहरू मार्फत कोभिड १९ फैलिन्छ । व्यक्तिहरूको शरीरभित्र कुनै पनि लक्षणविना पनि भाइरस रहेको हुन सक्दछ र थाहा नभई सर्न सक्दछ । मास्कले कोभिड १९ का छिटाहरु फैलिन नदिइ अन्य व्यक्तिमा सर्नबाट रोक्ने काम गर्दछ । मास्कले व्यक्तिलाई सासको थोपाहरू लिन र संक्रमित हुनबाट पनि जोगाउन सक्दछ ।
बालबालिकाले कहिले मास्क लगाउनुपर्दछ ?
बालबालिकाले मास्क लगाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा धेरै कुराहरूमा निर्भर हुन्छ । उनीहरूको उमेर, सुरक्षित रूपमा मास्क प्रयोग गर्ने क्षमता र उनीहरू बिरामी भएका कोहीसँगको भौतिक सम्पर्कमा छन् की छैनन् भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छन् । दक्षिण एसियाभरि, केहि सरकारहरूले सार्वजनिक र उमेरको आधारमा मास्क प्रयोगका थप आवश्यकताहरू निर्धारण गरेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफको यस्तो सल्लाह छः
५ वर्ष र सोभन्दा कम उमेरका बालबालिका
सामान्यतया, ५ वर्ष र सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले मास्क लगाउनु पर्दैन । यो सल्लाह साना बालबालिकाको सुरक्षा र समग्र हितमा आधारित छ ।
केही देशहरूले धेरै साना बालबालिकाको लागि मास्क प्रयोगको बारेमा थप स्थानीय मार्गदर्शनहरु जारी गरेका छन् । उदाहरणको लागि, यदि बालबालिका कोही बिरामी भएकाहरुसँग भौतिक रूपबाट नजिक छन् भने । यदि ५ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई मास्क लगाउनु आवश्यक छ भने, उनीहरु सधैं अभिभावकको सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने गरि प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
६ देखि ११ वर्षका बालबालिका
६ देखि ११ वर्षका बालबालिकाले मास्क लगाउनु पर्छ कि पर्दैन भनेर निम्न आधारहरु मार्फत निर्णय गर्नुपर्दछः
कोभिड १९ सो क्षेत्रमा व्यापक रुपमा फैलिएको छ की छैन ।
बालबालिकाले सुरक्षित र उपयुक्त रुपमा मास्क प्रयोग गर्न सक्दछन् की सक्दैनन् ।
मास्क पहुँचमा छ की छैन र तिनीहरूलाई धुन र प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ की सक्नुहुन्न ।
बालबालिकाले मास्क लगाइरहेको वयस्कले सुपरिवेक्षण गर्न सक्दछन भने ।
बालबालिकाले सुरक्षित रूपमा कसरी मास्क लगाउने, फुकाल्ने र राख्ने तरिका जानेका छन् की छैनन् ।
बालबालिकाले गम्भीर बिरामी हुने उच्च जोखिममा भएका अन्य व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका छन् की छैनन् । उदाहरणको लागी, वृद्ध र स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरु ।
मास्क लगाउने कारणले बालबालिकाको व्यक्तिगत सिकाइ र मनोवैज्ञानिक विकासमा हुन सक्ने सम्भावित प्रभावलाई पनि विचार गर्नुपर्दछ । बालबालिकाका शिक्षकहरू वा चिकित्सा प्रदायकहरूसँग परामर्श गरेर यो विषयमा निर्णय लिनुहोस् ।
१२ वर्ष र माथिका बालबालिका
१२ वर्ष वा माथिका बालबालिकाले वयस्कहरूले जसरी नै मास्क लगाउनु पर्दछ।
यसको अर्थ यदि सो क्षेत्रमा कोभिड १९ व्यापक रुपमा फैलिएको छ भने उनीहरुले सबै सार्वजनिक स्थानहरुमा मास्क लगाउनु पर्दछ र अरुबाट एक मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्न गाह्रो छ भने वा उनीहरू भित्री सार्वजनिक ठाउँमा छन् भने बालबालिकाले कुनै बेला मास्क लगाउनुपर्दैन रु
उनीहरू घरमा छन् र घरका कोही पनि बिरामी भएका छैनन्।
उनीहरू अन्य व्यक्तिबाट हरेक समयमा कम्तिमा १ मिटरको दूरी कायम राख्न सक्दछन्।
विभिन्न किसिमका मास्कहरू उपलब्ध छन् र कुन प्रकारको मास्क तपाईंको बालबालिकाले लगाउनुपर्दछ भनेर बुझ्नु महत्वपूर्ण छ।
गैर चिकित्सकीय मास्कको रूपमा पनि चिनिने कपडाको मास्कहरू प्रायः कपासले बनेका हुन्छन्। तिनीहरू विभिन्न शैली र रंगहरूमा आउँदछन् र तिनीहरुलाई धुन र पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रभावकारी हुनको लागि, तिनीहरूलाई कम्तीमा कपडाको तीन तहको बनाउनु पर्दछ।
बालबालिकासहित धेरै व्यक्तिहरुलाई यस प्रकारको मास्क लगाउन विश्व स्वास्थ्य संगठन सिफारिस गर्दछ ।
कपडाको मास्कलाई प्रत्येक प्रयोगपछि साबुन वा डिटर्जेन्टको प्रयोग गरी तातो पानीमा दैनिक रुपमा धुनु पर्दछ। यसरी धोएपछि, मास्कलाई पुनः प्रयोग गर्नुअघि पूर्ण रूपमा सुक्न दिनुपर्छ ।
कपडाको मास्क महँगो पर्न सक्दछ, तर आफैले आफ्नै घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ ।
सर्जिकल मास्क भनेर पनि चिनिने मेडिकल मास्क नबुनिएका कपडाबाट बनेको हुन्छ । यी सामान्यतया तीन तहका हुन्छन् र स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि डिजाइन गरिएका हुन्छन् ।
विश्वव्यापी महामारीको कारण मेडिकल मास्कहरुको आपूर्ति कम भइरहेको छ । त्यसैले केही समूहले मात्र यस्तो प्रकारको मास्क लगाउनु पर्दछ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गर्दछ । यसमा स्वास्थ्यकर्मीहरू, ६० वर्ष भन्दा बढि उमेरका, अन्तर्निहित स्वास्थ्य समस्या भएका, कोभिड १९ भएका व्यक्तिको हेरचाह गर्ने र कोभिड १९ को लक्षण भएका वा वा पुष्टि भएका वा संक्रमित व्यक्तिहरू पर्दछन्।
यसको अर्थ अन्तर्निहित स्वास्थ्य समस्या भएको र कोभिड १९ को लक्षणहरू वा पुष्टि भएको, वा जो कोही बिरामीहरुको नजिक छन् भने मात्रै बालबालिकाले यस प्रकारको मास्क लगाउनु पदर्छ ।
मेडिकल मास्कहरू धुन योग्य वा पुनः प्रयोग गर्न योग्य हुँदैनन् र आठ घण्टाको निरन्तर प्रयोगपछि सुरक्षित रुपमा फाल्नुपर्दछ ।
बालबालिकाले सहि तरिकाले मास्क लगाएको सुनिश्चित गर्ने
धेरै मास्क वयस्कहरूको लागि डिजाइन गरिएका हुन्छन् र बालबालिकालाई ठीकसँग मिल्दैन। तपाईं आफ्नो बालबालिकाको लागि मास्क किन्दै वा बनाउँदै हुनुहुन्छ, भने, यी कुरा निश्चित गर्नुहोसः
बालबालिकाको मास्कले उनीहरूको मुख, नाक र चिउँडो छोप्नुपर्दछ, र छेउमा कुनै खाली ठाउँ हुनुहुँदैन र उनीहरूको आँखाको दृष्टिलाई छेकेको हुनुहुँदैन ।
बालबालिकाले मास्क लगाएर छिटो छिटो हिँड्दा र कुरा गर्दा आरामसँग सास फेर्न सक्नुपर्छ ।
बालबालिकाले मास्क लगाउनुअघि र त्यसलाई हटाएपछि साबुन र पानीले हात धुनुपर्दछ भनेर थाहा पाउनुपर्छ ।
मास्कको विषयमा बालबालिकालाई जानकारी ः
आफ्ना बालबालिकालाई मास्क लगाउँदा निरन्तर उनीहरूको हात धुन र अरूबाट टाढा बस्न सिकाउनुहोस्।
मास्कले मात्र कोभिड १९ को संक्रमण र प्रसारण रोक्ने छैन । मास्कको प्रयोगसँगै बच्ने अरु उपायहरुसंयुक्त रुपमा प्रयोग गरे पछि मात्र यो प्रभावकारी हुन्छ।
बालबालिकालाई मास्क लगाउँदा उनीहरुले निरन्तर पालना गर्नुपर्ने उपायबारे जानकारी भएको सुनिश्चित गर्नुहोस्
उनीहरूले कम्तीमा ४०— ६० सेकेण्डसम्म बारम्बार साबुन र पानीले वा २०— ३० सेकेन्डसम्म अल्कोहल भएको सामग्रीको प्रयोग गरी हात धुने।
अन्य व्यक्तिहरुबाट कम्तिमा एक मिटर दूरी कायम राख्ने र भीड भएको ठाउँहरूबाट टाढा रहने ।
खराब भेन्टिलेसन भएको भित्री स्थानहरु ९इनडोर० बाट टाढा रहने ।
बाहिर भएको समयमा मास्क भण्डार गर्न सकिने झोला साथमा राख्नुहोस् ।
(युनिसेफ नेपालले तयार पारेको लेख साभार)